भरतपुर अस्पतालमा बिरामी वढ्न थाले – Click Khabar
भरतपुर अस्पतालमा बिरामी वढ्न थाले
चितवनः कोरोना भाईरस कोभिड १९ को त्रासका कारण उपचारका लागि आउने बिरामीको संख्या न्यून रहेको भरतपुर अस्पतालमा यस हप्ता सुरु भए संगै बिरामीको संख्या वढ्दै गएको छ । अस्पतालले बहिरंग सेवाको टिकट काट्ने समय वढाए संगै बिरामीको संख्या वढ्दै गएको हो ।
भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लिलाधर पौडेलका अनुसार गएको आईतबार अस्पतालको वहिरंग सेवामा ३ सय ८९ जना उपचारका लागि आएका थिए । त्यस्तै आकस्मिक सेवामा ८२ जना रहेका थिए । अस्पतालमा आईतबार बिरामीको संख्या वढि हुने गर्दछ । मंगलबार वहिरंग सेवामा ३ सय १५ जना र आकस्मिकमा १ सय ११ जना उपचारका लागि आएका थिए ।
लकडाउन संगै बिरामीको संख्या निकै घटेको थियो । चैतको २६ गते वहिरंग सेवामा ३१ जना र आकस्मिक सेवामा १ सय ४० जनाले उपचार लिएका थिए । अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीको संख्या पनि वढेको छ । अस्पतालले यही आईतबारबाट वहिरंग सेवाको टिकट काट्ने समय बिहान ९ वजेबाट १२ वजे सम्म बनाएको छ । यस अघिको भन्दा समय दोव्वर बढेको हो ।
अस्पतालको प्रसुती सेवामा बिरामीको चाप निकै वढेको छ । बिभागका प्रमुख डा. शुनिलमणी पोख्रेलका अनुसार दैनिक सरदर ३० जना गर्भवतीले अस्पतालमा वच्चा जन्माएका छन् । पूर्ण लकडाउनको समयमा यो संख्या १५ हाराहारी सम्ममा झरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गर्भवती हुनेहरु मध्ये ३० देखि ४० प्रतिशतको शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकाल्ने गरिन्छ । पोख्रेलले अस्पतालमा कोरोनाको डर मान्नु पर्ने अबस्था नरहेको वताउँदै सुरक्षित ढङ्गबाट बच्चा जन्माउने काम भईरहेकाले महंगो शुल्क तिरेर नीजिमा जानु पर्ने अबस्था छैन भन्नुभयोे । बालसंघन उपचार कक्ष समेत भएकाले अस्पतालमा बच्चा जन्माउनेको संख्या वढ्दो रहेको छ ।
पोख्रेलले गत वर्ष भरीमा १३ हजार ५ सय गर्भवतीले अस्पतालमा बच्चा जन्माएको भन्दै यस वर्षको जेठ मसान्त सम्ममा १२ हजार ३ सय जनाले बच्चा जन्माई सकेको बताउनुभयो । अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीले कोरोनाका बिरामी छुट्टै ठाउँमा अलग बाटो जाने गरि राखिएकाले अन्य बिरामीलाई कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो । अस्पतालमा बहिरंग टिकट लिने समय वढेको र सरकारी अस्पताल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश सबैमा पुगेका कारण बिरामीको संख्या वढ्दै गएको बताउनुभयो ।
अस्पताल .बिकास समितिका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले जिल्लामा सबै भन्दा सुरक्षित अस्पताल भरतपुर अस्पताल भएको भन्दै उपचारका लागि आउने बिरामीलाई कुनै जोखिम नरहेको बताउनुभयो । अहिले सबै तिर जोखिम छ उहाँले भन्नुभयो “अस्पताल आउनै पर्ने बिरामीका लागि सबै भन्दा सुरक्षित भरतपुर अस्पतालमानै छ ।” बिश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगाएतको निर्देशिका पूर्ण पालना गरेर उपचार हुने भएकाले सरकारी अस्पताल सुरक्षित रहेको उहाँको दाबि छ । नीजिको तुलनामा सरकारीमा निकै न्यून शुल्कमा उपचार हुन्छ । सुत्केरी लगाएतका कतिपय सेवामा अस्पतालमा पौसा लाग्दैन ।
कोरोना संक्रमित व्यक्तिको उपचार बापत १५ सय सम्म अनुदान दिने सरकारको तयारी
रोटा भाईरस बिरुद्धको औषधि साउन १ वाट
राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकमा आगलागी
२०७६, २ भाद्र सोमबार0
नमस्कार गर्नु यौगिक क्रिया ।
२०७६, ६ माघ सोमबार0
२०७६, २५ भाद्र बुधबार0
पुजा गरेर नारायणी लिफ्टबाट पानी छाडीयो
देउवा संग जनता पार्टीका नेताहरुको भेट